Tanàn-dehibe futuristic any Sina SEBIC vaovao manamboatra orinasa sy mpanamboatra ebikes | Funncycle
maotera Brushless, Motera miverina 36V 250W
Laharana maodely BEF-SC26RM
filanjana 26 * 1.75 ″ firaka aliminioma 6061, lasina TIG
Fork 26 * 1.75 ″, vy, TIG nohosorana
kodiarana INNOVA 26 * 1.75 ″ A / V Mainty
Tongava any am-piasana haingana ary miala sasatra miaraka amin'ny Ultimate SC26. Drafitra maoderina maoderina miaraka amina motera sy bateria mitambatra no manome ny Gazelle Ultimate SC26 fisehoana manaitra nefa mahavariana. Ny endrin'ny aliminioma dia miorim-paka tokoa, izay adika amin'ny fikirakirana fanatanjahan-tena sy ny fahaiza-manao tsara indrindra. Ho fanampin'ireo singa avo lenta, nahitana ambaratonga fampiononana avo lenta tamin'ny alàlan'ny fampiasana kodiarana tsy mahazaka puncture, grètre handlebar ergonomika ary fork aloha.
- Ny bisikileta mitondra aina nefa be fanatanjahan-tena miaraka amin'ny fanampiana mahery hatramin'ny 28 mph.
- Haavo avo lenta amin'ny sehatry ny lalana tsy dia tsara loatra noho ny fork aloha mihantona.
- Ny fihetsika miala sasatra miaraka amina fampisehoana matanjaka dia midika fa tsy misy dia lavitra loatra.
- Famolavolana, fampidirana ary fampiononana: ny Ultimate SC26 Speed ​​dia manana an'io daholo.
Teo aloha: SEBIC fahazavana vaovao mahafinaritra 20 inch mivalona bisikileta mini
Manaraka: SEBIC ebike lalana mahery vaika